Tontosa teto Antananarivo nandritra ny 3 andro ny andiany farany. Nandritra ny lanonam-pamaranana mikasika ny fihaonambe ara-toekarena ataon’ireo Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indiana, na ny FEIOI no nahafantarana fa atao any La Réunion ny andiany …Tohiny
Niditra tamin’ny andro fahatelo omaly, teny amin’ny tora-pasik’i Toamasina, ny fifanintsanana eo amin’ny fifaninanana beach soccer amin’ilay « Festival Tamaga midôla ». Araka izany, saika nampiseho ny fahaiza-manaony avokoa ireo ekipa folo mandray anjara amin’izany, …Tohiny
Mpanao gazety : 1052 no hahazo karatra maha matihanina
Hahazo ny karatra maha matihanina azy ireo mpanao gazety, manomboka ny fahefatry ny volana oktobra ho avy izao, hanomboka miaraka amin’ny fanolorana ny tondrozotra fampiharan’ny mpanao gazety ny asany, mandritra ny fotoam-pifidianana io fizarana io. …Tohiny
Mbola misy ny aretina tiberkilaozy na raboka eto Madagasikara. Eo amin’ny 4 isan-jato ny taha-pahafatesana eto Madagasikara. Tafakatra hatrany amin’ny 3000 Dolara kosa ny fitsaboana olona iray, izay hiantohan’ny fonds mondial. Marihina fa maimaim-poana ny …Tohiny